Ny dimy tamin’ireo dia fanindronana taribian-jiro hisintonana herinaratra mialoha ny kaontera. Ny iray dia ilay antsoina amin'ny voambolana teknika vahiny hoe "shunt". Ny tsy fifanarahan'ny fandaniana sy ny faktiora nefain'ireo tokantrano ireo no nampiahiahy ny JIRAMA ka nahatonga ny fidinana ifotony natao tany an-toerana. Nampiharina tamin’izy ireo avy hatrany ny lalana noho izany ka notapahana ny herinaratra tao amin'ireo tokantranona mpitandro ny filaminana ireo. Nampanantsoina teny amin'ny masoivohon'ny JIRAMA izy ireo hanonitra ny sandan'ny herinaratra nangalariny izay manodidina ny 8 tapitrisa Ar. Tsy lavitra fa mbola tao Ambatolampy ary mbola zandary ihany koa ireto tokantrano dimy monina ao amin'ny trano lehibe roa fantatra amin'ny anarana hoe "Trano kambana". Tratra nangalatra herinaratra koa izy ireo. Ny telo amin'ireo dia tranga fisintonana herinaratra tsy misy kaontera ny roa kosa fisintonana herinaratra mialoha ny kaontera. Nohamarinin’ny vadintany sy ny JIRAMA avokoa moa ireo halatra herinaratra ireo.